Nzira Yekuwedzera Kutengesa Neyekubatana Kushambadzira | ECommerce nhau
Maitiro ekuwedzera kutengesa nekutengesa kwakabatana
Iwe uchiri mumwe weavo vanhu vanozvipira iwe kune dhijitari commerce uye usingazive chaizvo izvo zvakabatana zvekushambadzira zvine? Zvakanaka, iwe uri munguva yekugadzirisa chiitiko chechinyorwa ichi kuti chigone kushandiswa kuvandudza kutengesa kwako kuburikidza neInternet. Iwe unofanirwa kuziva kuti yakabatana kushambadzira inzira inoenderana nekuwedzera mhedzisiro kune vashandisi vanoshanda online. Iyo inowanzo ine yewebhu domains anotarisira kushambadzira chaiwo zvitoro kuburikidza nekushambadzira mameseji kana kunyangwe kuburikidza nekutengesa kukwidziridzwa.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine Chero bedzi iwe uchiita maitiro aya nenzira ine hungwaru uye yakaenzana. Iyi ndiyo kiyi yekubudirira mune izvo zvinonzi zvakabatana kushambadzira. Nekuti kwete mune ese kesi ichave iri inobatsira manejimendi manejimendi kune ako wega zvido, sezvaunozoona mune ino chinyorwa. Nekuti pakupera kwezuva zvese zvinoenderana nemaitiro aunopa kune ino yekutengesa nzira.
Chero zvazvingaitika, iwe une nzira dzakasiyana siyana dzebhizimusi rekuwedzera kutengesa nekutengesa kwakabatana. Iwe haufanire kungopa mhinduro dzinoshanda chete, asi pamusoro pezvose zvepakutanga kuti uzvisiyanise kubva pamakwikwi. Mune imwe apo imwe yekiyi yekuzadzisa zvinangwa ichave yekugadzirisa zviito izvi kune chimiro chebhizinesi rako. Nekuti zvirizvo, hazvisi izvo zvekuzvigadzirira izvo online shopu yemitambo chitoro pane imwe yezvinhu zvekuteerera.
1 Wedzera kutengesa nekutengesa kwakabatana: kuderedzwa coupon
2 Mimwe mitsara yekuita mukubatana kushambadzira
3 Shandisa akakosha mazuva kukurudzira kushambadzira
4 Ipa mamiriro akasarudzika kumutengi
5 Kugadzira zvemhando yepamusoro zvemukati zvemukati
6 Nhengo dzemhando makirasi
Wedzera kutengesa nekutengesa kwakabatana: kuderedzwa coupon
Ichokwadi kuti haisi zano rekutanga rekuwedzera kutengesa, asi rinonyanya kushanda uye rinenge risingatombokundikana. Discount coupon anoshandiswa kumitengo kana mitengo yekutenga kunoitwa nevatengi vako. Uine kupinda kaviri, sezvo kudivi rimwe zvinounza kugutsikana kukuru uye kuvimbika kune avo. Uine purofiti mukutenga kwako mashandiro kubva kuzvigadzirwa kuenda kuzvinyorwa.
Nepo pane izvo zvinopesana, muridzi wechitoro chepamhepo (ndiko kuti, iwe pachako) anokwanisa mukupedzisira kusimudzira yake yekutengesa mhando kuburikidza nekutengesa. Nemhedzisiro yepfungwa nekuda kwekushandisa kwechiyero ichi icho chinogona kuwedzera kodhi portfolio yevatengi mune isina kunyanyisa nguva yakareba. Zvekutangisa-kwevamwe mimwe mitengo yemakwikwi kupfuura kare semhedzisiro emakomputa ekuderedzwa.
Iri zano rekutengesa, chero zvakadaro, rinounza mabhenefiti anotevera atinokufumura pazasi:
Ita zvirimo zvezvigadzirwa zvako kana masevhisi azivikanwe.
Gadzira zvidzikiso kana mabhonasi kwete sechinangwa mukutengesa, asi ku kusvika kune yakakura nhamba yevatengi.
Wana chakakwirira hukama nevashandisi uye nenzira iyi kubatana kunosimbiswa pakati pemativi ese.
Kuva kuwedzera kukwikwidza kupfuura mune mamwe mabhizinesi mune ako epamhepo bhizinesi chikamu.
Mimwe mitsara yekuita mukubatana kushambadzira
Chimwe chinhu chisingambofaniri kushayikwa kukudziridza rakavimbika chirongwa chebasa mukutengesa zvemagetsi ndechekuti unofanirwa kurerutsa zviito zvako nekushambadzira midhiya zvinonyanya kukosha nguva dzose. Nedzakateedzana dzekutengesa dzatinotarisira kwauri izvozvi:
Gadzirira chinhu chekutsigira kuti uite kushambadzira kwezvigadzirwa.
Vashandise pasi pechirongwa chebasa rimwe chete kuti iwe ubvise mutengo mune zvese zviito.
Sarudza nzira dzinoshanda kwazvo dzekutaurirana dzinoenderana nee-commerce mbiri yaunotungamira.
Shandisa akakosha mazuva kukurudzira kushambadzira
Unogona kusakwanisa kuzadzisa zvaunotarisira sediki uye wepakati dhizimusi muzvinabhizimusi nemazano ari pamusoro. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekusarudza zvimwe zvitsva. Imwe yacho ndeye kutora mukana wemisi mikuru mukushandisa: Nhema Chishanu, Mahoridhe, Kisimusi, nezvimwe. Iyi ingori nzira yemazuva ano yebhizinesi, asi iyo inounza mibairo mikuru. Kwete chete kugadzira zvimwe kutengesa, asiwo kusimudzira zvakabatana zvibodzwa. Kwamunofanira kuchengeta zvinhu izvi mupfungwa:
Kugadzira chaiwo matabhu pane webhusaiti webhizinesi.
Zivisa zvipo kuburikidza zvinhu zvinodzidzisa- Email, zvinyorwa, mablog, kana zvimwe zvekutsigira zvekutengesa zvinhu.
Dhizaina a dhisikaundi mutemo zvakanaka uye zvine musoro kune rako bhizinesi zvido.
Edza kuumbazve dhizaini yewebhu ine fomati inokwezva uye kuti inogona kuzivikanwa nemisi iyi inokosha.
Ipa mamiriro akasarudzika kumutengi
Hapana mubvunzo kuti zano rebhizinesi iri mukutungamira rinogadzira mhedzisiro yakanaka. Saka kuti vatengi kana vashandisi vagone kugadzirisa mamiriro ekutenga zvigadzirwa kana zvinyorwa. Ndiani asingafarire kugamuchira zvirevo zvehunhu uhu?
Nekudaro, kuti uite chirongwa ichi chekushambadzira iwe unofanirwa kuziva mutengi zvakanyatsonaka nekuti inogona kuve nemhedzisiro inokanganisa zvido zvevanamuzvinabhizimusi mudhijitari rekutengeserana chikamu Naizvozvo, kuitira kuti upe yakasarudzika mamiriro kumutengi, akateedzana ezvakakosha zvinodiwa zvinofanirwa kusangana kune wese munhu. Kufanana neaya atichafumura pazasi:
Ita chiito pane rakasarudzika boka mune vanobatana saka kuti chiyero chatichazotora chinoshanda chaizvo.
Gadzira uye gadzira maponi anonyanya yakagadzirirwa yakavimbika kwazvo vatengi.
Aya akasarudzika mamiriro haafanire kupa zvinodzokororwa hwaro. Kana zvisiri, pane kudaro, yakaumba chikamu chekupa-kamwe kupihwa uye nechinangwa chakanyatso tsanangurwa: kutengesa zvimwe kubva zvino zvichienda mberi.
Sechirongwa kuitira kuti pakupedzisira mushandisi sarudza kugadzira zviri pamutemo kutenga zvechigadzirwa uye nekudaro zvinoshanda senzira yekudzivirira.
Kugadzira zvemhando yepamusoro zvemukati zvemukati
Iri izano rinoshandiswa pamwe neakawanda muAnglo-Saxon nyika uye inogona kuva nemhedzisiro yakanaka kana ikatumirwa nemazvo. Zvingave zvichibva pakutumira vanobatana neruzivo rutsigiro runovanakidza. Mune fomu yemablog, zvinoonekwa zvinhu, zviverengero uye kunyangwe kusarudzwa kwemashoko nenhau dzakakodzera kwazvo. Iyo haifanire kunge iri yekuvhiringidza chiito, asi zvinopesana, inofanirwa kutsigirwa kubva kune rimwe bato umo vatengi nevatengesi vanomiririrwa.
Kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka, hapazovi nesarudzo asi kutevedzera zviri nyore mirau yekuita.
Ruzivo rwatinotumira kune mutengi inofanira kunge inonakidza kwazvo uye izvo zvimiro zvevanhu ava zvichafanirwa kusefa.
Zviri mukati zvinofanirwa kunge zviri zvakasiyana nedzimwe midhiya, ine kukosha kwakawedzerwa uko kunosiyanisa ruzivo urwu kubva kune vamwe vese.
Tinofanira kupa rimwe bato iro iwe unonzwa chikamu cheiyi zano uye tichiziva kuti hatizobudirire mune zvese zviitiko.
Izvo zvakakosha kuve nehunyanzvi muchikamu vanoziva kuendesa izvi zvinodzidzisa zvinhu zvine hukasha hwakakura mune ruzivo uyezve nechisimbiso chemhando.
Pakupedzisira, hatigone kukanganwa izvozvo kuremekedza sarudzo dzevatengi hakufanirwe kunge kuchishaikwa kana vakasagamuchira zvirevo zvedu mune izvi.
Nhengo dzemhando makirasi
Mukati meichi chirevo chizere, haufanirwe kukanganwa kuti kune akasiyana marudzi ekubatana kushambadzira. Iwe unoda kuziva kuti ndeapi anonyanya kukosha panguva ino? Inogona kunge iri poindi yerubatsiro pamari yaunowana (kana kutengesa) kuti iwedzere, asi zvakare kuti ipe kuoneka kukuru kuchitoro chako chaicho. Nemisiyano inonzwisisika pakati peimwe neumwe uye kuti uchaenda kunotevera.
Affiliate Networks: ndeavo vanoita sevamiririri pakati pevashambadzi nevakabatana ivo pachavo. Nemhando dzakasiyana siyana dzekushambadzira kana kushambadzira mameseji ayo anogona kusimudzira kumisikidzwa kwewebhu peji mune pfupi nzvimbo yenguva.
Iri zano rinoshanda, kunyangwe zvisiri zvepakutanga, kumabhizimusi madiki epamhepo uye izvo zvinoda rutsigiro kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvekutengesa. Uye zvakare, inopa yakanakisa yekutengesa yekutarisisa iyo inokuita iwe zvirinani kuronga chero zano mukushambadzira kwedigital.
Yakabatana PPCs: chishandiso chakaomesesa zvishoma chine chinangwa chakanangana nevakabatana vachikupa traffic yakakwana kune zvido zvechitoro chaunomhanya. Mune ino kesi, iri yakakosha yekushambadzira sisitimu yekutora matanho ekutanga mukutengesa kwemagetsi. Kusvika padanho rekuti inogona kukupa iwe kunyanya kuoneka pamambure.
Databases: icho chimwe chishandiso chekushambadzira kwedhijitari uko kushanda kunogara mukuchinjiswa kwedata nevashandisi iwe vakanyoresa. Kuburikidza neakateedzana emakomisheni uye imwe yeakanyanya kufadza ndeye CPM (Mutengo Zviuru Zviuru Maonero). Chero zvazvingaitika, mashandisiro ayo kune chikamu chakanaka chemuzvitoro zvemadhijitari haina kunyanyo shanda semumaenzaniso apfuura. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe unofanirwa kuve uine yakakoshesesa mutengi base kuitira kuti iwe ugone kuita kuti basa iri ribatsire pawebhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Maitiro ekuwedzera kutengesa nekutengesa kwakabatana
Mashandisiro ekushandisa Google Maitiro ekutsvagisa musika